U-Elon Musk ubanga ukuba iifektri zakhe zivelisa izixhobo zokuphefumla | Iindaba zeGajethi
U-Elon Musk ubanga ukuba iifektri zakhe zivelisa izixhobo zokuphefumla
Ingqonyela yengxabano ye I-Tesla kunye ne-SpaceX, u-Elon Musk, baqinisekisile kwinethiwekhi yabo ukuba bayazi ngesifo se-coronavirus esichaphazela umhlaba kwaye abahlali neengalo zabo bawele, bafuna ukufaka igalelo kwiisenti zabo ezimbini Yilwa neCovid-19. UMusk, owaziwa ngokungaziphathi kakuhle, ubonakalisa ukuba uzinikele kwidabi lokulwa intsholongwane njengezinye iinkampani ezinkulu zeemoto (iGeneral Motors neFord) eziye zajoyina ukwenziwa kolu hlobo lwesiphefumli.
Yonke into ibonisa ukuba ukunqongophala kuyakufika kwaye kulindelwe kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi, ukongeza, iingcali zilumkise ukuba iUnited States ijongene nokunqongophala kwezixhobo ezisisiseko ezifana nokuphefumla kwezi ntsuku zilandelayo ngenxa ukwanda okukhulu kwabantu abosulelekileyo.
Le yile tweet apho ibhiliyoni ibango ukuba ingasebenza kwimveliso koomatshini bokuphefumla xa kunokwenzeka izibhedlele zibufune:
Siza kwenza izixhobo zokuphefumla ukuba kukho ukunqongophala
- uElon must (@elonmusk) Matshi 19, 2020
Emva koko i-tweet yatsho ngokucacileyo ukuba Ndandivelisa Olu hlobo loomatshini lokubonelela ngezibhedlele ezininzi kwaye kuyo nayiphi na imeko luyithumela ngaphandle kwiindawo eziyidingayo:
Sisebenza kumatshini wokuphefumla, nangona ndicinga ukuba ayizukunqongophala ngeli xesha sinokwenza ngokwaneleyo ukuba sibaluleke
Kutheni ezi zinto ziphefumla zibaluleke kangaka?
Le ntsholongwane ichaphazela ikakhulu indlela yokuphefumla kunye nemiphunga yabantu, ke aba matshini bokuphefumla abasebenza ngokuthe ngqo ukugcina abantu bephefumla kubalulekile ukulwa neCovid-19. Le yingxaki yezempilo kwaye kukuba olu hlobo loomatshini lukhona ngobuninzi kodwa ngokucacileyo ekugqibeleni alufikeleli kuye wonke umntu kwaye oku kuba yingxaki.
Iingxelo zaseNyakatho Melika zenyanga kaFebruwari zibonisa ukuba iUnited States inayo I-160.000 yokuphefumla ifumaneka ezibhedlele kwaye malunga ne-8.900 kwindawo yokugcina ixesha likaxakeka. Ewe, kubonakala ngathi azizukulinela yiyo loo nto kubaluleke kakhulu ukuba baqale ukuvelisa ngokukhawuleza. Masithembe ukuba bonke abantu abadinga ezi zinto zokuphefumla bangazisebenzisa, kodwa kwilizwe lethu nase-Italiya, ukunqongophala kwemiphefumlo kwenza umsebenzi woogqirha ube nzima kakhulu.
Sifuna yonke into idlule kwaye ke eyona nto sinokuyenza kukuyenza Hlala Ekhaya ukuze ungagcwalisi impilo kwakhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » U-Elon Musk ubanga ukuba iifektri zakhe zivelisa izixhobo zokuphefumla
Umzi mveliso we-smartphone ubuyela kwimisebenzi evela e-China
Izifundo zasimahla, iinkonzo kunye nomxholo wokudlulisa ukubekwa